Uyagaleleka umboniso ongu-Oscar Pistorius | Ilisolezwe
Uyagaleleka umboniso ongu-Oscar Pistorius
Iindaba / 9 November 2017, 02:00am / Simphiwe kaFreddie
OSCAR Pistorius: Blade Runner Killer - umboniso odakanca ubomi bembaleki eyaba yindumasi kwihlabathi jikelele uOscar Pistorius kulindeleke uboniswe eMzantsi Afrika ngoMgqibelo we-18 kweyeNkanga ngentsimbi yesibhozo ngokuhlwa.
Oku kuza emva kwengxwaba-ngxwaba ejikeleze lo mboniso.
Lo mboniso ubalisa ngebali lokubulawa kukanobuhle uReeva Steenkamp, kuquka neziganeko ezakhokelela ekubhubheni kwakhe nangokunjalo ngetyala lasenkundleni lika-Oscar Pistorius.
Zombini iintsapho ezibandakanyekayo, eyakwaSteenkamp neyakwaPistorius azithathanga nxaxheba kulo mboniso-bhanyabhanya.
Nanjengoko sele usazi, ingxwaba-ngxwaba engalo mboniso iqale ngethuba ukrotyiswa eluntwini ebutsheni benyanga yeDwarha.
Zombini iintsapho, eka-Reeva Steenkamp neka-Oscar Pistorius zavakalisa umothuko ngokwenziwa kwalo mboniso nanjengoko zatyhola ngelithi khange kuditywane nazo, laze usapho lakwaPistorius lagrogrisa ngelithi lizakuthabatha amanyathelo ezomthetho.
Lo mboniso ekudala ujongwe ngabomvu kulindeleke uchukumise abemi boMzantsi Afrika ngeendlela ezohlukeneyo ngenxa yobu-ethe-ethe obeza neli tyala elalandelwa ngabantu behlabathi nanjengoko ubukhulu becala lalisasazwa ngqo koomabonakude.
Lo mboniso osekelezelwe kwibali lokwenene, wabhalwa ngu-Amber Benson waze wadidiyelwa ngabakwa-ThinkFactory Media.
Indawo ka-Oscar idlalwa ngu-Andreas Damm ngelixa ekaReeva iboniswa nguToni Garrn ongunobuhle waseJamani.
UPistorius usentolongweni ethothoza iminyaka emithandathu ngetyala lokubulala uSteenkamp kumzi wakhe osePitoli ngomhla we-14 kweyoMdumba ka2013.